Uyifaka njani imali kwiATM inyathelo ngenyathelo nakwiibhanki ezahlukeneyo | Ezezimali
Uyifaka njani imali kwiATM
Xa usiva ngeeATM, into yesiqhelo kukuba ucinga ukuba yindawo apho unokukhupha khona isixa esithile semali kwiakhawunti yakho yebhanki, ngaphandle kokungena eofisini okanye ulinde ukuba bazokuza kuwe. Nangona kunjalo, uyazi ukuba aba matshini banokusetyenziselwa ezinye izinto? Umzekelo, unokufunda ukufaka imali kwi-ATM.
Ukuba awuzange uyithathele ingqalelo ngaphambili, siza kuthetha nawe malunga nendlela yokufaka imali kwi-ATM, imida yayo, iimeko kwaye, ngaphezulu kwako konke, ukuba ungayenza njani kwiibhanki eziphambili zaseSpain.
1 Yintoni omele uyiqwalasele xa ufaka imali kwi-ATM
2 Uyifaka njani imali kwiATM
2.1 Imali kwiATM yeLa Caixa
2.2 Ngena kwi-Santander
2.2.1 Ngekhadi ledebhithi
2.2.2 Akukho khadi lekhadi
2.2.3 Ngena kwenye iakhawunti
2.3 Ngena kwi-BBVA
Yintoni omele uyiqwalasele xa ufaka imali kwi-ATM
Xa usiya kwi-ATM, into yesiqhelo kukuba uyayikhupha imali, kodwa zininzi izinto onokuzenza, ezinje ngokufaka imali. Lo msebenzi, obandakanya ukulinda ude ube ujongiwe kwiofisi yebhanki, ungawenza ngeATM. Ngoku, kubalulekile ukuba uthathele ingqalelo oku kulandelayo:
Sincoma ukusebenzisa i-ATM ebhankini engayi kukuhlawulisa iikhomishini. Oko kukuthi, zama ukuhlala ungumbali webhanki apho ufuna ukufumana khona imali, nokuba yeyakhawunti yakho, iakhawunti yesihlobo okanye nokuhlawula omnye umntu (ngokungena kwiakhawunti yabo).
Ingeniso ayiboniswanga "ngokuzenzekelayo" ukuba uyenza ngemvulophu. Ngokwesiqhelo bayishiya "ilindile" kuba kufuneka bayenze ngesandla. Oko kukuthi, nge-ATM ungayenza inkqubo, kodwa ukuba uyenza ngemvulophu, ayizukuboniswa kwiakhawunti ngokuzenzekelayo. Ukuba amatyala akhululekile, ngaphandle kweebhendi zerabha, iiklip okanye nantoni na, iya kuba ngokukhawuleza.
Iibhanki zamkelwe kuphela ze-10,20,50, 100, XNUMX kunye ne-XNUMX ze-euro. Ngaphandle kwalabo abayivumeli, kuncinci imali.
Kukho umda wengeniso. Ibhanki nganye imisela eyayo, kodwa ngokubanzi uya kuhlala unomda wemali oza kungena kuyo. Ngaphaya koku, kuya kufuneka ungene eofisini ukuze ukwazi ukufaka imali engaphezulu. Umzekelo, kwimeko ye-BBVA, bavumela ubuninzi be-3 yokusebenza kunye ne-100 yamaphepha emali inye, ngaphandle kwexabiso lephepha ngalinye. Oko kuthetha ukuba ungangena ukuya kwi-30000 ye-euro nge-ATM.
Okulandelayo, kwaye sisazi ukuba kukho iibhanki ezahlukeneyo, kwaye ngeendlela ezahlukeneyo, siza kukuxelela ukuba ngawaphi amanyathelo okufaka imali kwii-ATM eziphambili zezinto ezinjengeLa Caixa, iSantander, iBBVA ...
Imali kwiATM yeLa Caixa
Amanyathelo esiwanikwe eLa Caixa ngala alandelayo (ngekhadi lebhanki):
Cofa kwiqhosha "Ingeniso". Oku kuqala ukusebenza.
Khetha uhlobo lwedipozithi ekufuneka yenziwe.
Chaza ukuba yeyiphi i-akhawunti eya kuba lapho apho kuya kwenziwa khona idiphozithi, oko kukuthi, ukuba iya kuba kwi-akhawunti yakho ye-La Caixa, eyomhlobo okanye yesihlobo, okanye eyenye ibhanki.
Phawula imali emayihlawulwe kunye nomxholo.
Faka imali yamaphepha, njengoko bakuxelela kumfanekiso ovela kwiscreen. Ezi kufuneka zikhululeke.
Inombolo oyifakileyo iya kuvela kwiscreen kwaye, ukuba ichanekile, kufuneka uqinisekise. Nje ukuba ugqibile, ungarhoxisa ikhadi.
Kwibhanki yaseSantander kukho iindlela ezahlukeneyo zokufaka imali.
Kule meko, into ekufuneka uyenzile kukubeka ikhadi kumatshini we-ATM kwaye uchwetheze i-PIN ukuze ikubone. Okulandelayo, kwiscreen kufuneka ujonge ukhetho "lokufaka imali". Oku kuya kukusa kwesinye isikrini apho kuya kufuneka uphawule xa ufuna ukungena.
Islot iya kuvulwa apho kuya kufuneka ubeke khona amatyala. Kubalulekile ukuba ezi zingayi kwiimvulophu kwaye zingahambi neziqeshana. Ngale ndlela umatshini uya kuba nakho ukuzibala kwaye ziya kubonakala kwiscreen. Unika u-Ok kwaye unokufumana irisithi ngento oyenzileyo.
Akukho khadi lekhadi
Ukuba awunalo ikhadi, okanye awufuni ukwenza njalo, ungasebenzisa iselfowuni yakho xa unananisa. Ewe kunjalo, kufuneka ukhuphele usetyenziso kuyo: I-Apple Pay (kwi-iOS) okanye i-Samsung Pay (kwi-Android). Amanyathelo ke alandelayo:
Vula usetyenziso kwaye ucofe kwikhadi ledebhithi. Kuya kufuneka uyisondeze kumfundi onxibelelana naye.
Faka iPIN uze ubethe «imali yedipozithi».
Phawula imali oza kuyifaka kwaye ufake amatyala ngeslot evulekileyo.
Kwimeko yesibini isixa siya kuboniswa. Unika Kulungile kwaye kunjalo.
Ngena kwenye iakhawunti
Kwimeko apho ufuna ukufaka enye iakhawunti yebhanki, xa ucofa kwimali yedipozithi, kuya kufuneka uchaze inombolo yeakhawunti ofuna ukuyifaka kuyo.
Ukuba into oyifunayo kukwazi ukuyifaka imali kwi-ATM ye-BBVA, kuya kufuneka uyazi ukuba ungayenza nokuba ungumthengi okanye akunjalo. Kodwa kuwo omabini amacala kuya kubakho ukusikelwa umda.
Ukuba ungumthengi, konke oya kukudinga yikhadi lakho lekhredithi, iikhowudi zokufikelela okanye i-BBVA App. Ukuba awungomthengi, uya kuba nakho ukufaka iakhawunti ye-BBVA kuphela kodwa uthintelwe nge-1000 euros.
Amanyathelo okungena ngala alandelayo:
Beka ikhadi kwi-ATM (okanye ukuba awunayo, cofa ku "Fikelela ngaphandle kwekhadi / incwadi".
Faka iPIN yekhadi.
Khetha "Yenza olunye utyando" kwaye, apho, uye "kwiDiphozithi mali".
Ngoku iyakuvumela ukuba ukhethe ukuba umvuzo ungenye yeeakhawunti zakho okanye uye kwenye ongayiyo umniniyo.
Kuya kufuneka ufake inani lemali oza kulifaka kunye nomxholo kunye nomxhamli.
Okulandelayo, kwaye ulandela imiyalelo, kuya kufuneka ufake imali kwislot. izakuqala ukudanyaza ukuze uyazi ukuba iphi.
Umatshini uya kubala imali kwaye ukubala kuya kuvela. Kweli nqanaba ungakhetha ukufaka ngaphezulu okanye ukuqhubeka.
Ukuba uyaqhubeka, uya kuba nakho: ukufumana inxenye yemali okanye ukuyifaka kwiakhawunti yakho.
Emva kwesishwankathelo ukuze uqinisekise, yonke into iya kwenziwa kwaye ungayifumana irisithi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Banca » Uyifaka njani imali kwiATM
Fumana imali eyongezelelweyo